Belt Conveyor any Indonezia - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>Feeder And screen vibrating>> Belt conveyor in Indonesia
Fandefasana batery any Indonezia
article from: Feeder And screen vibrating | fotoana: Aprily 5, 2013 | Tag:Feeder And screen vibrating	|
Fandefasana enta-mavesatra any Indonezia, Shanghai XSM dia fitaovam-pambolena manerantany matihanina, Belt Conveyor any Indonezia, fitaovana fiarovana ara-tsakafo, orinasa mpamokatra varotra fanafody. Ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, ny voalohany bande conveyor, vibrating feeder, fitaovana fandefasana entona handefa ny jaw crusher, impact crusher, hydraulic crusher dia harona matevina matevina, ary faharoa amin'ny a jawcrusher kely, hammer crusher Fitrandrahana harena ankibon'ny tany faharoa tadin efijery Ny fihaonana amin'ny mari-pamantarana maromaro amin'ny ore dia entina mankany amin'ny baolina baolina, ultrafine mill ert magnetic separators, flotationmineral machine dia mifidy karazam-pahalalana maro samihafa. Mazava ho azy, fa fanodinana fitrandrahana harena ankibon'ny tany fotsiny ity, Shanghai XSM mifototra amin'ny karazan-kira misy anao fitaovam-pako izay mifanandrify tsara anao, raha manana fanontaniana ianao, dia miangavy anay hifandray aminay na tsindrio ny tsara eo amin'ny sehatry ny famolavolana, ny mpiasa ara-teknika dia manome anao valiny amin'ny antsipiriany.
Miaraka amin'ny mineraly be dia be, ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany dia mivoatra haingana ary mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Ny fiforonan'ny fandefasana entana any Indonezia dia mitana toerana lehibe ao amin'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany. Ireo mpanamboatra dia misy ampahany am-pahefana, izay mandroso sy tsotra amin'ny rafitra, mora foana. Ny fitaovam-pamokarana ataontsika dia azo ampifanarahana amin'ny toeram-pambolena sy fiompiana. Ampiasaina amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany sy ny orinasa ary ny toeram-pambolena izy ireo mba hamindrana fitaovana sandany na tsotsotra, na fitaovana enti-matavy. Araka ny fitaovana fampitaovana hafa, ny rafitra famindrana dia mety ho iray tsy miankina na samihafa conveyor na miaraka amin'ny fitaovana famindrana hafa.
Karazana sy tombontsoa:
Ny fitaovam-pandevenana vita amin'ny bateria dia azo fehezina amin'ny toe-javatra ara-pahasalamana manomboka amin'ny -20 ℃ ka hatramin'ny 40 ℃. Ny hafanana azo avy amin'ny fitaovam-pandefasana entana dia tokony ho ambany noho ny 50 ℃. Ny karazana fehikibo novokarin'ny SJLC dia toy izao manaraka izao:
Misaraka amin'ny fomba fitondra mandeha:
STD-Mechanical Drive: Nosoritsoran'ny tsindry fanodikodinam-pandaminana (miaraka amin'ny motera ivelany) sy ny rafitra fiara mifehy azy;
STDJ Ⅱ fiarandalamby mechanical drive. Izy io dia manamboatra milina matevina sy mandehandeha;
STD-Electric Rotor Drive Series Nosarihan'ny rotoro elektrika izy io.
Fizarana amin'ny fomba fanoratana:
Seranana voafaritra: Manangana mivantana eo amin'ny fototra;
SDY-Portable Series: Azo mora sy mihetsika mora ary afaka manitsy ny fahafaha-manao.
Samihafa amin'ny Structures:
Ny tranofiofan'ny biriky novokarin'ny SJLC dia manana rafitra telo samihafa.
Misy karazan-daba roa, iray amidy amin'ny fanamboarana làlana ary ny iray tsy misy. Rehefa mandidy ny milina dia tokony hanome antsika torolalana mazava ny mpanjifa.
Teknika momba ny Fandefasana entana:
Takelaka Belt (mm) Ny halavan'ny fefy (m) / Power (Kw) Belt Speed ​​(m / s) Capacity (t / h)
Belt Conveyor Manufacturer any Indonezia:
Ny Shanghai Company dia mpanamboatra mpanamboatra fiaramanidina manerantany. Ny fitaovana avo lenta dia omena ho an'ny mpanjifa maneran-tany, indrindra fa ny fitateran'ny fandefasana entana any Indonezia dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny fizotry ny harena ankibon'ny tany. Ankoatr'izany dia ilaina ihany koa ny manompo amin'ny mpanjifa rehetra. Alaharo anao hatrany hatrany ary mitazona anao.
← Toeram-ponenana mihovotrovotra